Nezveutano makambani pasirese vari kuvimba nekuvapo pamhepo uye webhu mhinduro dzekusiyanisa masevhisi avo. Nharembozha mhinduro inobatsira vashandi vezvehutano kuwana tsamba dzekurapa dzevarwere uye kuongorora, kugadzirisa ruzivo rwevarwere, kubvunza mafomu emishonga, uye kuwiriranisa data rakanangana nedhipatimendi rakanangana nechipatara, pasina kubatana kwewaya. Mhinduro dzakadai dze nhare dzinounganidza mashandiro, kudzoreredza kwevarwere, manejimendi rekodhi rehutano, marekodhi ekubhadhara, marekodhi echiremba uye inopa kusangana neBI uye CRM masisitimu nekudaro zvichigonesa vashandi vepachipatara kutora uye kuwana ruzivo vachiri parwendo vasinganonoke chero sarudzo uye chiito chakamirira.
Newgenapps inopa akasiyana siyana etsika dhizaini masevhisi ayo anokodzera chipatara chako uye nehutano hwehutano hwakaganhurirwa zvido. Isu tiri vanopupurirwa Amazon Web Services mupi, iyo inobatsira vatapi vezvehutano kutenderera pasirese kununura tarisiro yakagadziriswa kuvarwere vavo. Iwo masevhisi anobatsira kudzikisira nguva yekumhanyisa zviripo zvebasa uye kupa mukana kune ane simba ekuongorora kugona uye maficha.
1. Kuvandudza kushanda zvakanaka
2. Kuzvigadzirisa kwehutano chero kupi zvako pasi.
3. Kugovana kugovana kwedata
4. Yechokwadi nguva yekuuraya yekutarisa system muHospital
5. Patient tsananguro manejimendi system
6. Cloud mhinduro
7. Utano Data management